Oge eruola maka nyocha azụmaahịa afọ gị | Martech Zone
Ọ bụ oge ahụ n’afọ ọzọ… mgbe ị ga wepụta oge iji nyochaa atụmatụ ahia gị kwa afọ. Afọ na-esote nwere ike ịdị mkpa karịa afọ ọ bụla gara aga na ngwa ngwa nke usoro mgbasa ozi mmekọrịta. Nke a bụ ihe m na-akwado ịnakọta:
Mgbasa Ahịa site na Ọkara - nke a bụ ezigbo ego akwụgoro maka ahịa na mgbasa ozi na mpụga. Ighapu nke a n'ime uzo di nkpa. N'aka ozo, edela 'online'… gbasaa na ntaneti rue na ebe nrụọrụ weebụ, ahia ahia ahia, igwe mmadu, wdg.
Marketing Resources Emefu site Ọkara - nke a bụ ụgwọ ọrụ akụ na ụba nke ndị ọrụ mmadụ yana akụrụngwa na akụrụngwa. Ozo, jide n’aka na itufu nke obula n’elu ala.
Nnweta Ahịa ma ọ bụ Ahịa Ahịa site Ọkara - nkea bu onu ogugu na onu ogugu nke ndi anakpo medium gunyere ma ndi okwu na okwu onu. Ghọta ọtụtụ ndị ahịa, yana uru ndị ahịa ahụ bara, dị mkpa maka ịhazi maka afọ ọzọ. Somefọdụ ndị na-ajụ mmụọ nwere ike iweta obere ego… mana nnukwu azụmahịa.
Njide ndị Ahịa site na Ọkara - nke a nwere ike were mbọ ọzọ, mana ghọta ihe ụlọ ọrụ gị na-eme nke na-emetụta njigide ndị ahịa gị. Ọtụtụ mgbe a na-ahụta mmemme agụmakwụkwọ na ịgba izu dị ka ego. Ghọta uru ọrụ ị na-akwụ n'efu ... ị ga-ahụ uru kasịnụ ebe a!
Afọ gafere Afọ - kedu ka usoro ịzụ ahịa gị si arụ ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga? You nwere ike ịkụ nzọ na ọ ga-agbanwe ọzọ n'afọ ọzọ! Gbanwe usoro mgbasa ozi gị, akụrụngwa na atụmatụ ga-eme ka azụmaahịa azụmaahịa gị na ego gị bawanye.
Emela ka nyocha ahịa ahịa afọ na-agwụ. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-emefu ego n'ịzụ ahịa ebe ha nwere ihe onwunwe, ebe ha -eche ego ha na-enweta na-abịa, ma ọ bụ ebe ha dị mma. Reviewme nyocha nyocha nke afọ ga-enye gị ngwaọrụ ịchọrọ iji wakpo afọ na-abịa site na iji usoro mmeri ọhụrụ!
Tags: Analyticskwa afọakụkọ kwa afọnjedebe nke afọahịa ajụjụnyochaa ahịaafọ ọhụrụafọ karịrị afọnyochaa afọ-afọ
Ugo isii nke Social Media Optimization